Loluphi olona phawu luqhelekileyo lweZodiac apha? - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Amathuba kukuba, sele uzibuze ukuba kukho abantu abaninzi emhlabeni abanophawu olufanayo lwezodiac njengawe. Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kusifundisa okuninzi malunga nokuba singoobani na abaphantsi nesizathu sokuba senze izinto ngendlela ethile. Ngamnye wethu unobuntu bakhe obuhle obahlukileyo, yiyo loo nto siye sagqiba ekubeni sizibeke kolona phawu luqhelekileyo lwezodiac ukuya kolona luqhelekileyo e-US. Ngaba ungowolu phawu luxhaphakileyo, okanye uluhlobo olungaqhelekanga?
Ngokuqinisekileyo iimpawu zodiac ukufumana upapasho oluninzi kunabanye, kodwa ngaba ipesenti yabemi ithethelela lonke olu dumo nengqalelo? Ii-Aries, iiLeos, kunye ne-Scorpios zehlabathi mhlawumbi zizo abantu abaninzi abaziwayo, kodwa ngaba ngokwenene zezona rhoqo? Ewe, zilungiselele isilumkiso somonakalisi, kuba ukuze sicacise le ngxoxo, sinokutyhila ngokukodwa ukuba iScorpio lolona phawu luqhelekileyo phakathi kwabemi base-US.
Ezona zibonakaliso zezodiac eziqhelekileyo e-US, zibekwe
Sibeke kwindawo eyona miqondiso yezodiac edumileyo xa kufikwa kwindlela ababonwa ngayo phakathi koontanga babo, okuthetha ukuba ngoku lixesha lokuba iimpawu zezodiac eziqhelekileyo. Leliphi iqela elimiselwe ukuba liphume phambili linamalungu amaninzi? Nangona sithanda ukucinga ukuba sahlukile, kukho iibhiliyoni zabantu emhlabeni kunye neempawu zeenkwenkwezi ezili-12 kuphela.
-Fumana uqikelelo lwakho lonyaka enkosi yakho 2021 ihoroscope -
Jonga into ezayo ngoncedo lwePsychic!
I-Scorpio lolona phawu luqhelekileyo e-US = 9.6% yabemi
I ubuntu Scorpio ithatha isithsaba njenge olona phawu lwezodiac luxhaphakileyo e-US. Ngazo zonke ezi Scorpios zintsonkothileyo nezingaqondakaliyo zijikeleze, ubomi buqinisekisiwe ukuba buyonwaba kakhulu kwaye buzele yimincili. Zingaphi iiScorpios ozaziyo?
Ipesenti yabemi base-US = 9.4%
Ubuntu bukaVirgo bufika kwindawo yesibini esiqinisekisa kakhulu kuba kunjalo ibekwe njenge uphawu olukrelekrele lwezodiac . Ukwazi ukuba ubukrelekrele bulawula bunamandla mhlawumbi yeyona nto ikhuthazayo esiyivileyo imini yonke!
Ipesenti yabemi base-US = 9.3%
I-bubbly kwaye inomdla kakhulu ubuntu Gemini ngomnye wababaleki bangaphambili kuphawu lwezodiac oluqhelekileyo. Ubuntu beGemini bu ziphele yintsini kwaye ungaze usiphoxe xa kufikelelwa kulonwabo.
Ipesenti yabemi base-US = 9.1%
Uthando-oluthandayo ubuntu Pisces idada indlela yayo ukuya kwisiqingatha esiphezulu sezona mpawu ziqhelekileyo zezodiac. Abantu bePisces banomoya wokwenene womoya kwaye bahlala behleka wonke umntu. Obu buntu buphuphayo buyosulela ngokupheleleyo!
Ipesenti yabemi base-US = 8.8%
Njengomnye kwaba bathathu Iimpawu zomoya , Libra kakhulu unesiphiwo xa kuziwa kunxibelelwano kunye notshintshiselwano lwentlalo. Ukuba neeLibra ezininzi ezijikeleze kuthetha ukuba siphantse saqinisekiswa incoko entle yonke imihla.
Ukugqiba isiqingatha esiphezulu sezona zibonakaliso ze-zodiac eziqhelekileyo luphawu lwe-Cancer horoscope. Umhlaza ngokuqinisekileyo yenye ye eyona miqondiso yezodiac enovakalelo kwaye uhlala esongeza ukucofa kuka-s ukunyaniseka kunye nokunyaniseka kutshintshiselwano oluqhelekileyo.
Oku uphawu olunenkani lwezodiac ingena kwinani lesixhenxe kuluhlu lwethu lweyona miqondiso yezodiac eqhelekileyo. Nangona i Ubuntu bukaTaurus bunenkathalo ngokwemvelo, mhlawumbi kufuneka sizibale njengethamsanqa ukuba olu phawu loMhlaba alulolona phawu luqhelekileyo, kungenjalo akukho mntu unokuze avume kuyo nantoni na!
Ipesenti yabemi base-US = 8.2%
Ukucinga okusebenzayo kunye nengqiqo ubuntu Capricorn ngowesibhozo e-US ngoku. UCapricorn ukrelekrele kakhulu kwaye bayakuthiya ukuchitha ixesha labo kwizinto ezingeyomfuneko. Nangona besenokubonakala bebanda, enyanisweni banothando olukhulu lokupha.
Ipesenti yabemi base-US = 8.1%
Ubuntu be-Aries buhamba phambili kuluhlu xa kuziwa kulandelelwano lwezodiac, kodwa abantu base-Aries bakwindawo yesithoba kuphela kuluhlu lwethu lolona phawu luqhelekileyo. Njengento yabo yezodiac, I-Aries yibhola yomlilo kwaye ayithathi impendulo; Akukho nto inokubamba i-Aries emva!
Ipesenti yabemi base-US = 7.3%
Ngoku silungile kwaye singene kwinxalenye yokugqibela Iimpawu ezincinci zezodiac eziqhelekileyo e-US kunye neSagittarius kwindawo yeshumi. I-Sagittarius ithathwa njengenye ye imiqondiso yezodiac eyonqenayo kwaye ayikho ngokwenene kumsebenzi onzima; mhlawumbi kufuneka sizibale iintsikelelo zethu ezizezeshumi!
Ipesenti yabemi base-US = 7.1%
Abanomlilo nekratshi Leo ubuntu ugqiba kwindawo yeshumi elinanye kodwa akaphoxeki. U-Leo unamandla okwenene inkwenkwezi kwaye uyathanda ukuba sisazulu sokuqwalaselwa. Ngelishwa ku-Leo, bakude nokuba lolona phawu luqhelekileyo, kodwa siqinisekile ukuba i-ego ka-Leo ayiyi kubetha!
Ubuncinci uphawu oluqhelekileyo = i-6.3% yabemi base-US
Ukuvala indawo yethu kwaye kukho i Ubuncinci uphawu lwezodiac luqhelekileyo Aquarius ubuntu . Abantu baseAquarians bathanda ubomi kodwa bathiyile ukuzibophelela kunye nezibophelelo ezikruqulayo. Uphawu olungaphambili lwezodiac luphela kukuphila okwangoku kwaye ukonwabele ubomi kangangoko kunokwenzeka.
Ingelosi yeHarael Guardian isikelela abantu bomthonyama abazalelwa phantsi koKhuseleko lwayo ngobukrelekrele
Zeziphi iimpawu zeZodiac eziya kufumana iNtengiso ngo-2021?